1881 Courthouse, Igumbi lamajaji - I-Airbnb
1881 Courthouse, Igumbi lamajaji
385 okushiwo abanye
Gawler, South Australia, i-Australia
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Natalie
U-Natalie Ungumbungazi ovelele
Yakhelwe ngo-1881, endaweni yomlando yaseChurch Hill, enezinsiza zesimanje, indawo ethule, emaphakathi yeGawler inikezela ngendawo yokuhlala ehlukile, yangasese, emfishane, eduze neSigodi saseBarossa. Ngijabulele ukwabelana ngesipiliyoni sesakhiwo esihle kangaka, esihle ngezintengo zepaki yekharavani engcono kune-caravan. Itholakala ngemuva kwe-Courthouse, izivakashi zingena endlini kanokusho, ekamelweni elikhulu elinosofa netafula. Ibhavu elikhulu, elizimele liphezulu. Izimpahla zasekuseni zokuqala zinikezwa ekamelweni.
Igumbi lamaJaji linikeza igumbi lokulala elikhulu, eliwubukhazikhazi elinosofa nedeski, kanye ne-ensuite enokugeza okuzimele (alikho ikhishi). IGawler iyidolobha elingokomlando esangweni eliya eSigodini saseBarossa, kanti indawo yaseChurch Hill lapho kuhlala khona i-Courthouse, isohlwini lwamagugu. Umgwaqo uCowan uyindawo ethule, ebanzi, eJacaranda enezihlahla eziseduze nezitolo, izindawo zokudlela, izindawo zemidlalo kanye nezindawo ezithakaselwayo kumzila Wamagugu. Itholakala kumakhilomitha angama-40 ukusuka e-Adelaide CBD, iCourthouse ingamamitha angama-250 ukusuka esiteshini sesitimela. Yakhiwa ngo-1881, iguqulwa ngokucophelela ibe yindawo yokuhlala.
I-Gawler inamapaki amaningi kanye nezindlela ezinhle zokuhamba eduze kwemifula yayo emithathu. Kungaphansi kwehora elilodwa ukuya eClare Valley, imizuzu engama-40 ukuya ogwini noma edolobheni kanye nemizuzu engama-20 ukuya eSigodini saseBarossa.
4.90 · 385 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-385
IChurch Hill iyindawo ethule nokho isendaweni emaphakathi. Kunamasonto amane nezinye izakhiwo eziningi zomlando ku-Cowan Street, kanye neposi lokugitsheliswa kwamahhashi! Isiteshi Samaphoyisa sisehlangothini olulodwa lweNkantolo yaseNkantolo kanye neHhovisi lamaSheshi kolunye. I-Gawler Aquatic Centre, izinkantolo zethenisi kanye nesiteshi sesitimela i-Gawler Central uhambo olufushane. Ekupheleni kwentwasahlobo umgwaqo uba nsomi ngezimbali ze-Jacaranda. Njengesango eliya enyakatho, i-Gawler inamahhotela amaningi omlando wendawo.
Ngitholakala ngocingo futhi ngezinye izikhathi ngihlala esizeni endaweni yokuhlala eseduze, kodwa singase singahlangani ngaphandle uma ucela okuthile ngokukhethekile. Mina nendodana yami siyakujabulela ukuhamba futhi sisebenzisa i-Air BnB emhlabeni wonke. Uma ngithumele umlayezo, ngiyakwazi ukuphendula phakathi namahora angu-2.
Ngitholakala ngocingo futhi ngezinye izikhathi ngihlala esizeni endaweni yokuhlala eseduze, kodwa singase singahlangani ngaphandle uma ucela okuthile ngokukhethekile. Mina nendodan…
UNatalie Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Gawler namaphethelo